တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ အလံတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကောင်းကင်ပြာ၊ နေအဖြူနှင့် ကမ္ဘာအနီ
၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉၁၂ (ရေတပ်သုံးအလံ)
၅ မေ ၁၉၂၁ (တရုတ်အစိုးရမှစသုံး)
၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၂၈ (တရုတ်ပြည်မ၌)
၂၅ အောက်တိုဘာ ၁၉၄၅ (ထိုင်ဝမ်၌)
အနီရောင်နောက်ခံ၊ လက်ဝဲဘက်ထောင့်၌ အပြာရောင် ထောင့်မှန်စတုဂံ၊ ထို့ထောင့်မှန်စတုဂံ၌ အဖြူရောင်နေလုံးပါရှိသည်
လူ‌ဟော်တုန်း နှင့် ဆွန်ယက်ဆင်
ရေတပ်အလံ (Naval Jack)
အပြာရောင်ကောင်းကင်နှင့် အဖြူရောင်နေအလံ (青天白日旗)
အနီရောင်နောက်ခံတွင် အပြာရောင်ထောင့်မှန်စတုဂံ၊ ထိုထောင့်မှန်စတုဂံတွင် အဖြူရောင်နေပါဝင်သည်
အနီရောင်နောက်ခံကို ရွှေရောင်ဘောင်ခတ်ထားပြီး အပြာရောင်စက်ဝိုင်း၊ ထိုစက်ဝိုင်းတွင် အဖြူရောင်နေပါဝင်သည်
ပြာနေသောကောင်းကင်၊ ဖြူနေသောနေလုံး၊ နီနေသောကမ္ဘာ
တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ၏အလံတော် (中華民國國旗) တွင် အနီရောင်နောက်ခံပါရှိသည်။ လက်ဝဲဘက်ထောင့်၌ အပြာရောင်ထောင့်မှန်စတုဂံ ပါရှိပြီး ထိုထောင့်မှန်စတုဂံ၌ ရောင်ခြည် ၁၂ ကြောင်းဖြာထွက်နေသော အဖြူရောင်နေလုံးပါရှိသည်။ အလံ၏အမည်မှာ "ကောင်းကင်ပြာ၊‌ နေလုံးဖြူ၊ ကမ္ဘာနီ" (Blue sky, white sun and the wholly red earth) ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ထိုအလံကို ၁၈၉၅ တွင် ချင်းမင်းဆက်အား ဆန့်ကျင်သည့် တရုတ်ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးအဖွဲ့ (Revive China Society) မှ ရေးဆွဲခဲ့ရာ အပြာရောင်နောက်ခံနှင့် နေလုံးသာပါရှိခဲ့သည်။ ၁၉၀၆ တွင် ဒေါက်တာဆွန်ယက်ဆင်သည် အနီရောင်ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထိုအလံကို ၁၉၁၂ တွင် ရေတပ်အလံအဖြစ် စတင်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ၁၉၂၉ တွင် တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ (အာအိုစီ) ၏ နိုင်ငံတော်အလံအဖြစ် ကူမင်တန်အစိုးရမှ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ တွင် ကွန်မြူနစ်သူပုန်များမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (ပီအာစီ) ကို တည်ထောင်ခဲ့ရာ ထိုအလံကို တရုတ်ပြည်မ၌ သုံးစွဲခြင်းမရှိတော့ပေ။ ထိုင်ဝမ်နှင့် ထိုင်ဝမ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရာ ကျွန်းငယ်များ၌သာ ယခုသုံးစွဲလျက်ရှိကြသည်။
ပီအာစီသည်အာအိုစီ၏ လွတ်လပ်သောအခြုပ်အခြာအာဏာကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ ထိုင်ဝမ်ဒေသအား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ပီအာစီ၏နယ်မြေ၌ အာအိုစီအလံအသုံးပြုခွင့်ကို တားမြစ်ထားသည်။ ထို့အပြင် ပီအာစီသည် အာအိုစီကို ကိုယ်စားပြုရာ၌ ပီအာစီအလံကိုသာ အသုံးပြုသည်။ အချို့သောထိုင်ဝမ်ပြည်လွတ်လပ်ရေးကို အား‌ပေးထောက်ခံသူများသည် အာအိုစီအလံကို ကူမင်တန်ပါတီနှင့် ပက်သက်မှုရှိသောကြောင့် မနှစ်သက်ကြပေ။
၃.၂ ကမ္ဘောဒီးယား၌ ပိတ်ပင်ထားခြင်း
"ကောင်းကင်ပြာနှင့်နေလုံးဖြူ" (Blue Sky withaWhite Sun) အလံကို ၁၈၉၅ ဖေ‌ဖော်ဝါရီတွင် လူဟော်တုန်း (Lu Haodong) မှ ဟောင်‌ကောင်၌ ပြသခဲ့သည်။ နေ‌ရောင်ခြည် ၁၂ ခုသည် နှစ်တစ်နှစ်၏ ၁၂ လ နှင့် စက်နာရီ ၂ နာရီနှင့်ညီမျှသော တရုတ်ရိုးရာအချိန် အတိုင်းအတာဖြစ်သည့် "shichen" (時辰; shíchén) ဟူသည့် ယူနစ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဆွန်ယက်ဆင်သည် အနီရောင်ကို ချင်းမင်းဆက်အားတော်လှန်ခဲ့သည့်သူများ၏ ပေးဆပ်ခဲ့သောသွေးကို ကိုယ်စားပြု၍ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အလံပါအရောင်များသည်လည်း ဆွန်ယက်ဆင်၏ "လူထုအခြေခံစည်းမျဉ်းသုံးရပ်" ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အပြာရောင်သည် အမျိုးသားရေးနှင့် လွတ်လပ်မှု၊ အဖြူရောင်သည် ဒီမိုကရေစီနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေး၊ အနီရောင်သည် ပြည်သူ့စားဝတ်နေမှုဖူလှုံရေးတို့ကို အသီးသီးကိုယ်စားပြုကြသည်။
အာအိုစီ၏အလံကို တစ်ချိန်ကတရုတ်ပြည်မ၌ အသုံးပြုလွှင့်ထူခဲ့သောကြောင့် အချို့သောသူများသည် အာအိုစီအလံကို တရုတ်အမျိုးသားရေးဝါဒအပြင် တရုတ်နိုင်ငံပြန်လည်စည်းရုံးရေးကို ပြသနေသည်ဟူ ယူဆကြသည်။ အချို့သောသူများသည်လည်း အာအိုစီအလံကို တရုတ်အမျိုးသားရေးဝါဒထောက်ခံမှုနှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်များအားဆန့်ကျင်ကြောင်းတို့ကို ပြသနိုင်သည့်အပြင် ဆွန်ယက်ဆင်၏ နိုင်ငံရေးအမြင်များနှင့် သူ၏လူထူစည်းမျဉ်းသုံးရပ်ကို မြတ်နိုးကြောင်းကိုလည်းပြသနိုင်သည် ဟုယုံကြည်ကြ၍ လွှင့်ထူကြသည်။
ပီအာစီ၏အစိုးသည် အာအိုစီအလံလွှင့်ထူမှုကို ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားသော်လည်း အာအိုစီ၏အစိုးရအနေဖြင့် ထိုအလံကို ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်း ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ အာအိုစီ၏အလံကို လွှင့်ထူထားခြင်းဖြင့် ထိုင်ဝမ်နှင့်အခြားအုပ်ချုပ်ရာ ကျွန်းငယ်များသည် ပီအာစီအစိုးရမှ အုပ်ချုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အစိုးရမှ အုပ်ချုပ်လျက်ရှိသော လွတ်လပ်သည့်တိုင်းပြည်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြသနိုင်သည်။ အချို့သော ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေး အားပေးသူများသည်လည်း ထိုအကြောင်းကြောင့်ပင် အာအိုစီအလံအား လွှင့်ထူစေလိုကြသည်။
နိုင်ငံတော်အလံ ဆောက်လုပ်ဆွဲသားပုံ (တရုတ်ဘာသာဖြင့်)
တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ‌တော်၏ အလံနှင့်တံဆိပ်ဥပဒေမှ ဖော်ပြချက်များအရ –
အလံအချိုးအစားမှာ ၂:၃ ရှိပြီး အနီရောင်အများစုရှိရမည်။
အလံ၏ လေးပုံတစ်ပုံမှာ အပြာရောင်ဖြစ်ရမည်။
ထိုအပြာရောင်နေရာ၌ ရောင်ခြည် ၁၂ ဖက်ပါဝင်သော နေလုံးရှိရမည်။
နေရောင်ခြည် တစ်ခုချင်းစီသည် ၃၀ ဒီဂရီရှိ၍ နေရောင်ခြည်ထောင့် အားလုံးပေါင်း ၃၆၀ ဒီဂရီရှိရမည်။
ထိုနေလုံးအတွင်း၌ အပြာရောင်ကွင်း၏ အချင်းဝက်ကို အဖြူရောင်နေလုံး၏ အချင်းကို ၁၅ ဖြင့်စား၍ ရရမည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ကူမင်တန်အစိုးရမှ နေလုံးပါဝင်သည့်‌‌နေရာ (canton) ကိုရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ ဥပဒေများကိုထက်မံပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့သည်။ ထိုဥပဒေတွင် ထိုနေလုံးပါဝင်သည့် ထောင့်မှန်စတုဂံသည် ၂:၃ အချိုးအစား ရှိသော်လည်း အတိုင်းအတာအားဖြင့် ၂၄x၃၆ မီတာဟူ၍ ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ နေရောင်ခြည်ပါဝင်သော နေလုံး၏အချင်းမှာ canton အမြင့်၏ ၆⁄၈ ဖြစ်ရာ ၁၈ မီတာဖြစ်သည်။ . နေရောင်ခြည်မပါဝင်ဘဲ နေလုံးသီးသန့်၏အချင်းမှာ canton အမြင့်၏ 1⁄၄ ဖြစ်ရာ ၉ မီတာဖြစ်သည်။ နေလုံး၏ အပြာရောင်အကွင်းနှင့် နေ‌ရောင်ခြည်၏အမြင့်မှာ နေလုံးအချင်း၏ 1⁄၁၅ ဖြစ်ရာ ၀.၆ မီတာဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်တစ်ခုချင်းစီသည် ၃၀ ဒီဂရီကျယ်ဝန်းသည်။
တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ‌အလံတော်၏ အနီးစပ်ဆုံးအရောင်ကုဒ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Pantone 2738 C 2347 C White
၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာတွင် အဆိုတော် ဒဲစက်စ် ချန်း (Deserts Chang) သည် မန်ချက်စတာမြို့ရှိရှိးပွဲ၌ အာအိုစီအလံကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သဖြင့် ပီအာစီအစိုးရသည် ပေကျင်းမြို့တွင်ကျင်းပမည့် ပွဲအစီအစဉ်အားဖျက်ချခဲ့သည်။
အက်ပဲကုမ္ပဏီသည် ပီအာစီ၌ပြုလုပ်ထားသော အိုင်အိုအက်စ်ဖုန်းများတွင် အာအိုစီ၏အလံအီမိုဂျီ (🇹🇼) ကို အသုံးပြုခြင်းမှ ကန့်သတ်ထားသည်။ထို့အပြင် ဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲကြောင့် ဟောင်ကောင်နှင့် မကာအိုမှ ဖုန်းများရှိ အာအိုစီအလံအီမိုဂျီကို လုံးဝဆင်ဆာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၃ နှစ်မြောက် ဟောင်ကောင်ပြန်အပ်ခြင်း အထိန်းအမှတ်နေ့တွင် အာအိုစီအလံအခု ၃၀ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်သူအား ဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တို့ကဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ပေကျင်းအိုလံပစ်၌ "တရုတ်ထိုင်ပေ‌‌ အမျိုးသား ဘေ့စ်ဘောအသင်း" ခေါ် ထိုင်ဝမ်ဘေ့စ်ဘောအသင်းကို ကစားပွဲ၌လာရောက်ကြည့်ရှုသူများသည် ပီအာစီမှအာအိုစီအလံကို ပိတ်ပင်ထားသောကြောင့် ဆိုရှယ်လစ်မြန်မာအလံကို အသုံးပြု၍ထိုအသင်းအား အားပေးခဲ့ကြသည်။ ထိုဆိုရှယ်လစ်မြန်မာအလံကို လူအများစုက အာအိုစီအလံဟူ၍ မှားယွင်းပြီးမြင်လေ့ရှိကြသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် အာအိုစီအလံကို လုံးဝပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ဖေ‌ဖော်ဝါရီတွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်သည် တရုတ်တစ်ပြည်ပေါ်လစီ (One-China policy) ကို ထောက်ခံသောအားဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယားနယ်မြေအတွင်း အာအိုစီအလံအသုံးပြုခြင်းကို တရားမဝင်ကြောင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မရိန်းတပ် (Marine Corps)
အရန်တပ်ဖွဲ့ (Armed Forces Reserve)
Kingdom of Tungning (၁၆၆၁–၁၆၈၃)
ချင်းမင်းဆက် တရုတ်ပြည်အလံ (၁၈၆၂–၁၈၈၉)
ချင်းမင်းဆက် တရုတ်ပြည်၏ နောက်ထပ်ပုံစံ (၁၈၈၉–၁၉၁၂)
ကြယ် ၁၈ လုံး အလံ
ကြယ် ၁၉ လုံး အလံ
တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော နိုင်ငံတော်အလံ (၁၉၁၂–၁၉၂၈)
၁၉၂၈ မှစ၍ ယနေ့အထိ အသုံးပြုသော နိုင်ငံတော်အလံ (၁၉၁၂ မှစ၍ ရေတပ်အလံအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်)
ဝမ်ကျင်းဝေ၏တရုတ်ပြည်ခေါ် ဂျပန်လက်အောက်ခံ တရုတ်ပြည်၏အလံ (စာတန်းမှာ "ငြိမ်းချမ်ရေး၊ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသားတည်ဆောက်ရေး" ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ထိုတြိဂံဝါသည် တစ်စပ်တည်းမဟုတ်သော်လည်း အလံတော်ပေါ်၌ လွှင့်ထူရသည်။)
၁၈၉၅ တွင် ရေးဆွဲခဲ့သော"ကောင်းကင်အပြာနှင့် နေလုံးအဖြူအလံ" (ကူမင်တန်ပါတီ၏ အလံလည်းဖြစ်သည်)
၁၉၉၆ တွင် အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့သော ထိုင်ဝမ်အလံ
ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံး၌ ဆွန်ယက်ဆင်ပုံနှင့် နိုင်ငံတော်အလံကိုချိတ်ဆွဲထားသည်
၂၀၀၄ သမ္မ‌တရွေးကောက်ပွဲ၌ ထောက်ခံသူများက အလံလွှင့်နေကြစဉ်
ဆီအက်တယ်ရှိ ထိုင်ပေစီပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုရုံး၌ အာအိုစီအလံများတွေ့ရစဉ်
ဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲ၌ အာအိုစီအလံကို လွှင့်နေစဉ်
ဂျပန်ရှိတိုကျိုတာဝါမှ အာအိုစီအလံ၏ ‌အရောင်များကို ထွန်းညှိထားစဉ်
နန်ကျင်းမြို့ သမ္မတအိမ်တော်ရှိ အာအိုစီအလံများ
ဆွန်ယက်ဆင်ဂူဗိမာန်ရှိ အပြာရောင်ကောင်းကင်နှင့် အဖြူရောင်နေလုံးအလံ
↑ ၁.၀ ၁.၁ National flag (in en)။
↑ Official gazette of Ministry of the Navy of Republic of China, July 1912, page 344, pdf Archived 8 March 2021 at the Wayback Machine., National Central Library - Gazette Online
↑ Office of the President (2011)။ National Flag။ Republic of China (Taiwan)။
↑ 中華民國國徽國旗法 (in zh) (1954-10-23)။
↑ Yu-liang၊ Tai (2006-05-19)။ 黨旗國旗之製造及使用辦法 (in zh)။
↑ Taiwan singer upsets China with flag stunt[လင့်ခ်သေ] - The Telegraph.7November 2013.
↑ Goodin၊ Dan (July 10, 2018)။ iPhone crashing bug likely caused by code added to appease Chinese gov't။ “He said his fix addressed code Apple added likely to appease the Chinese government; this is the code that caused crashes on certain iDevices when users typed the word Taiwan or received messages containingaTaiwanese flag emoji.”
↑ Wardle၊ Patrick။ "A Remote iOS Bug"၊ objective-see llc၊ July 10, 2018။
↑ Apple Pulls Taiwanese Flag Emoji From iPhones in Hong Kong။ Bloomberg။
↑ Taiwan flag emoji disappears from latest Apple iPhone keyboard။
↑ TVBS News - 日本爆烏龍！錯把緬甸國旗當我國旗 Archived 12 June 2011 at the Wayback Machine., May 23, 2010 (Traditional Chinese)
↑ NOW News - 沖繩車站介紹台灣，誤植緬甸國旗 Archived 27 September 2013 at the Wayback Machine., May 23, 2010 (Traditional Chinese)
↑ "Myanmar's flag mistaken as Taiwan's in Okinawa"၊ 25 May 2010။ 14 May 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 28 May 2010။
↑ With flag ban, Cambodia adds to Taiwan's woes (7 February 2017)။
↑ With flag ban, Cambodia adds to Taiwan's woes (5 February 2017)။ 16 January 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 May 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons တွင် Flags of the Republic of China နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
Etiquette of Raising the National Flag, Ministry of the Interior (Traditional Chinese) Archived 20 January 2021 at the Wayback Machine.
Flag of the World မှ တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ၏အလံ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ၏_အလံတော်&oldid=737981" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၁:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။